Tamin’ny fifaninanana lahatsary sy lahatsary amin’ny finday ho an’ny asa fanaovan-gazetin’olon-tsotra manerantany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2018 3:23 GMT
Avy any Espaina, ElPais.com mitondra antsika ny Movil Film Fest, horonantsary 1 minitra amin'ny finday aterineto. Na dia mifototra amin'ny sarimihetsika natao tao an-toerana aza izy io, izay antsoin'izy ireo hoe “firenena”, dia tsy misy ny famerana momba izay zo-pirenen'ireo mpamokatra, na dia ireo horonantsary ao an-toerana ihany aza no hifaninana amin'ny loka lehibe, ireo lahatsary avy any ivelan'i Espaina dia hanana ny sokajiny manokana. Ny lahatsary rehetra dia tsy tokony hihoatra ny 1 minitra ary nalaina tamin'ny finday na PDA, izay antsoin'izy ireo hoe fitaovam-pifandraisana. Mbola hatramin'ny 21 aprily 2008 no farany fandefasana ny lahatsary.
Ny zava-baovao tamin'io taona io, hisy ny loka ho an'ny lahatsoratra tsara indrindra amin'ny olom-pirenena manoratra isan'andro, na dia mbola tsy nilaza izay loka hozaraina aza izy ireo. Hisy ihany koa ny loka ho an'ny mendrika indrindra ho an'ny sarimihetsika vahiny tsara indrindra sy ny sarimihetsika tsara indrindra “Vita ho an'ny finday”. Hifidy ireo sokajy lehibe ny mpitsara ary ny mpijery dia hifidy ny tiany indrindra amin'ny sokajy safidin'ny mpijery farany. Tamin'ny herintaona , dia natao tamin'ny hafatra SMS ny fifidianana, saingy tamin'ity taona ity dia nesorin'izy ireo izany ary nanokatra izany ho amin'ny fifidianana an-tserasera. Azo jerena ato amin'ity rohy ity ny lahatsary nalefa tamin'ny herintaona.
Ny safidin'ny Mpitsara iraisam-pirenena tamin'ny taona lasa dia Dolly Ovadia Nahon avy any Haifa, Israel, izay nanoratra hoe:
Ireo mpandresy ho an'ny “Sampan'ny firenena mikambana momba ny vaovao ho an'ny daholobe – Loka ho fampahafantarana anao ary Lokan'ny mpijery ho an'ny Sarimihetsika Iraisam-pirenena” dia lasan'ny mpianatra 10 momba ny fifandraisana iraisampirenena avy any Brezila, mampiseho sombiny manazava ny herisetra an-tanandehibe ao Rio de Janeiro:
Fahafahana iray hafa hahazoana vola sy hampalaza anarana ho anao ny fifaninanana lahatsarin'ny olompirenena ‘manoratra’ isan'andro nokarakarain'ny VideoNews24.net[es]. Na dia ireo bilaogera an-dahatsary Espaniola aza no tena mampiasa izany, dia misokatra ho an'ny olona te-handray anjara izany. Nisokatra tamin'ny 1 martsa ny fifaninanana ary hifarana amin'ny 31 Jolay. Ny lahatsary telo voalohany no hofantenana avy amin'ireo izay be mpitia indrindra sy laharana ambony indrindra omen'ny mpiserasera ary hofidiana amin'izy ireo avy eo izay ho mpandresy. Ny torolalana feno ho an'ny fandraisana anjara dia azo jerena amin'ny fanarahana ity rohy ity [es].